बहुसंख्यक मतदाता मेरो पक्षमा छन्, मेरो जित सुनिश्चित छ : गौतम गुप्ता, अध्यक्ष पदका उमेद्वार - BirtaJyoti
super userSeptember 11, 2019 9:35 am 2
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक नेपाल औषधि ब्यबसायी संघ झापाको अबिधेसन र निर्बाचन हुदैछ । यही भदौ २७ गते हुने निर्बाचनका लागि यतिबेला झापामा चुनाबी माहोल तात्दै गएको छ । यो चुनाबलाई आ आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि उमेद्वारहरु घर दैलोमा ब्यस्त छन् ।
२०५५ सालदेखि दमकस्थित महाबीर फार्मेसी संचालनमा ल्याएर औषधि ब्यबसायमा पाइला हालेका गौतम गुप्ता एकजना बरिष्ठ ब्यबसायी हुनुहुन्छ । यद्दपि, आफ्ना पीता देबराज गुप्ताले २०३० सालमा खोलेको जयश्री महाबीर फार्मेसीको निरन्तरता स्वरुप उहाँले औषधि ब्यबसाय गर्दे आउनु भएको हो । ०५९ सालमा पहिलो पटक नेपाल औषधि ब्यबसायी संघ मेची शाखाको कार्यसमिति सदस्य पदमा चुनिएर त्यसपछि लगातार सो संघमा बिभिन्न पदमा कार्य गरिरहनु भएको गुप्ता ०६२ सालमा सोही समितिको उप कोषाध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभयो । त्यसपछि ०६४ सालमा कोषाध्यक्ष, २०७० सालमा महासचिब, ०७३ सालदेखि उपाध्यक्ष पदमा रहेर कार्य गरिरहनु भएको छ । उहाँ हालसम्म संघको केन्द्रिय थोक उप समितिको सदस्य रहनुभएको छ । यसैबीच सो चुनाबमा अध्यक्ष पदका उमेद्वार गौतम गुप्तासँग कुराकानी गरेका छौं ।
यो चुनाब कसरी लागिरहेको छ र यसको कस्तो तयारी छ ?
हेर्नुहोस्, यो चुनाब औषधि ब्यबसायीका लागि धेरै महत्वको छ । किनभने यो संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि पहिलो पटक हुन भइरहेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघले पनि यसै अनुरुपको बिधान तयार गर्यो र चुनाब हुन गइरहेको छ । पहिलो पटक जिल्लास्तरमा समिति बन्दै छ ।
यसअघिसम्म मेची अंचलका ब्यबसायी एकै ठाउँमा थिए भने अब जिल्लामा संगठित भइरहेका छन् ।
तसर्थ, यो चुनाब भब्यताका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको छ । यसका लागि मैले मेरो उमेद्वारी दर्ज गरेको छु । मैले पनि राम्ररी नै तयारी गरिरहेको जानकारी गराउँदछु ।
चुनाब भनेर मात्र हुँदैन । यसका लागि तपाईका एजेण्डाहरु के के छन् ? र, ब्यक्तिगत तयारी कस्तो छ ?
होे, चुनाबमा जाने भनेर मात्र हुँदैन । यसका लागि रामै तयारी आबश्यक हुन्छ । मैले पनि यसको तयारी गरिरहेकै छु । मुलतः मैले लामो समयदेखि यसै संघमा आबद्ध भएर धेरै साथीहरुको मन जितेको छु ।
लगातार संघमा रहँदा मैले औषधि ब्यबसायी साथीहरुको दुःख सुखमा साथ र सहयोग गर्दे आएको कुरा कसैले होइन भन्न सक्दैन ।
म बहुसंख्यक ब्यबसायीहरुकै आग्रह र अनुरोधमा चुनाबको मैदानमा आएको हुँ । अहिले संघका मतदाता मध्ये बहुसंख्यक साथीहरु मेरो पक्षमा उभिनुभएको छ । र, मैले उहाँहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु ।
र, म बहुसंख्यक ब्यबसायीहरुकै आग्रह र अनुरोधमा चुनाबको मैदानमा आएको हुँ । अहिले संघका मतदाता मध्ये बहुसंख्यक साथीहरु मेरो पक्षमा उभिनुभएको छ । र, मैले उहाँहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु ।
जहाँसम्म चुनाबी एजेण्डाको कुरा छ । मैले यो संघमा रहेर लामो समयदेखि गरिरहेको काम र त्यसबाट प्राप्त अनुभवले मलाई एजेण्डा तय गर्न धेरै सहज भएको छ । औषधि ब्यबसाय भनेर मात्र हुँदैन, यसमा पनि धेरै समस्या छन् । ब्यबसायीका धेरै कठिनाइ छन् । मुख्यरुपमा त सरकारी नीति नियम र कानुनको अभाबमा धेरै ब्यबसायीले दुःख पाएका छन् ।
भएका कानुन र नीतिबारेमा पनि जानकारी नहुँदा गाह्रो परिरहेको छ । मैले यी कानुनी जटिलता र नीतिगत अफ्ठ्यारो चिर्नका लागि अन्तरक्रिया र छलफल चलाउने एजेण्डा अगाडि ल्याएको छु ।
यसलाई क्षेत्रीयस्तरमा नै संचालन गर्ने र त्यसमा नीति नियम, कानुनका बारेमा जानकारी गराउनेदेखि इन्फर्मेसन नेटबर्क बनाउने योजना मसँग छ । सरकारी स्तरबाट हुने अनुगमनका कारण ब्यबसायीलाई दुःख छ । यसलाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट हुने बाताबरण बनाउन म दत्तचित्त भएर लाग्ने योजना बनाएको छु । खासगरी सरकारका परिबर्तित स्वास्थ्य नीतिहरुको जानकारीको अभावमा अहिले पनि ब्यबसायीले धेरै पीडा भोगीरहेका छन् । यो कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु ।
खासमा कतिपय ब्यबसायीमा ब्यबस्थापकीय कमजोरी पनि छ । संस्थाको काम ती ब्यबसायीहरुलाई बिभिन्न तालीम गराउने पनि हुन्छ । जस्तोः लेखा, ट्याक्स, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र नेतृत्व विकासजस्ता तालीमको खाँचो छ ।
यसैगरी एउटा सफ्टवेयर निर्माण गरेर सबै ब्यबसायीलाई त्यस मार्फत सूचना पठाउने र आन्तरिक प्रणालीलाई ब्यवस्थित बनाउनेदेखि संघको वेबसाइट निर्माण गरेर सूचना प्रवाह गर्नेसम्मका मेरा योजना छन् ।
संस्थामा आबद्ध भएका ब्यबसायीहरु धेरै प्रकारका छन् भन्ने सुनिन्छ । तपाई ती सबैलाई कसरी समेटेर लैजाने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त सदस्यलाई यो मेरो संस्था हो भन्ने महसुस गराउन सक्नु पर्दछ । र, सदस्यमा पनि यो भावना हुनुपर्दछ । यसका लागि संस्थाले सदस्यको हित र समन्वय गर्न जरुरी छ । सदस्यता ब्यबस्थित र बैज्ञानिक बनाउने बित्तिकै धेरै समस्या दुर हुनेछन् ।
क्लिनिक दर्ता र फर्म नबीकरणमा सहजीकरण, औषधि ब्यबसायी राहत कोषको ब्यबस्था र बीमा कार्ययोजना बनाएर लैजाने मेरो थप योजना छ । साथै, संघलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने र स्रोत परिचालन गर्ने तयारी म गरिरहेको छु ।
संस्थालाई सामाजिकरुपमा अग्रणी संस्थाको रुपमा चिनाउन र यसका सदस्यहरु सामाजिक हुनु पर्छ । गाउँठाउँमा मर्दा पर्दादेखि सामाजिक कार्यहरुमा सबै अगाडि आउनु पर्दछ ।
यति गरेर मात्र हुन्छ र ? संघ र ब्यबसायीको सामाजिक दायित्व हुँदैन ?
हैन, म भन्दैछु । ब्याबसायिक हितसँगै हामीमा सामाजिक भावना पनि हुनुपर्छ । संस्थालाई सामाजिकरुपमा अग्रणी संस्थाको रुपमा चिनाउन र यसका सदस्यहरु सामाजिक हुनु पर्छ । गाउँठाउँमा मर्दा पर्दादेखि सामाजिक कार्यहरुमा सबै अगाडि आउनु पर्दछ । यसका लागि सोसल वेल्फेयर फण्ड बनाउने र संस्थालाई जिल्लाको उन्नती र प्रगतिमा सामेल गराउने मेरो योजना छ ।
तपाईको चुनाबी अबस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? र, तपाइले चुनाब जित्ने आधारहरु के के हुन ?
मैले माथि नै पनि भनिसँकें कि म लामो समयदेखि ब्यबसायीका सुख, दुःखमा साथमा साथ र काँधमा काँध मिलाएर हिँडेको मान्छे हुँ । यो संस्था र ब्यबसायमा मेरो लामो लगाव छ ।
अझ भनौं, म ब्यबसायी साथीहरुकै पहलकदमीमा उमेद्वार बनेको हुँ । बहुसंख्यक मतदाता मेरो पक्षमा छन् । म यस अबधिमा हरेक साथीहरुको घरघर, पसलपसलमा पुगिसकेको छु । मैले उहँहरुको मन र मुटुमा आश्रय पाइसकेको छु । सबैलाई मैले मेरा योजना र नीतिबारे सबिस्तारपूर्वक बताइसकेको छु । तसर्थ, मेरो जित सुनिश्चित छ ।
ठूलो कुरा त मेरो यस ब्यबसायमा लगाव, पारिवारिक पृष्ठभूमिदेखि आजको यूवा पुस्ता, जसले मेरो क्षमता र योग्यताको पहिचान गरेको छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
र, फेरि तपाईको संचारमाध्यम मार्फत पनि यही शन्देश प्रवाह हुनेछ र फेरि एकपटक सबै मतदाता साथीहरुलाई मलाई औषधि ब्यबसायी संघ झापाको अध्यक्ष पदमा अत्यधिक मत दिएर बिजयी बनाइदिनु हुनेछ भन्ने आग्रह गर्दछु ।
चुनाब र उमेद्वारबारे यसो भन्छन्,
पूर्व अध्यक्ष, ने‌पाल औ‌षधि व्यवसायी संघ, मे‌ची
मुलुक संघीय संर‌चनामा गइसके‌पछि सबै‌ संर‌चनाहरु परि‌वर्तन भएका छन् । ने‌पाल औ‌षधि व्यवसायी संघ पनि पहिला अञ्चल र‌ के‌न्द्र दुई तहमा थियो‌ । अहिले‌ जिल्ला, प्रदे‌श र‌ के‌न्द्र तीन वटै‌ तहमा संर‌चना निर्माण गनेर्‌ क्रममा छ । व्यावसायिक हिसाबले‌ हे‌नेर्‌ हो‌ भने‌ यो‌ व्यवसायमा संख्या बृद्धि भइर‌हे‌को‌ छ ।
औ‌षधि व्यवसायी संघको‌ जिल्लाको‌ अधिवे‌शन नयाँ प्रयो‌ग हो‌ । जिल्ला अधिवे‌शनलाई व्यवसायीले‌ महत्वका साथ हे‌र‌े‌का छन् । महासचिव र‌ को‌षाध्यक्ष निर्विर‌ो‌ध भइसके‌ पनि अध्यक्ष लगायत अन्य पदका लागि आज निर्वाचन हुँदै‌छ ।
यो‌ निर्वाचनलाई औ‌षधि व्यवसायीहरुले‌ महत्वका साथ हे‌र‌े‌का छन् । जिल्ला तहको‌ निर्वाचन भए पनि अञ्चल निर्वाचनको‌ भन्दा बढी माहो‌ल ताते‌को‌ छ । अध्यक्षका दुवै‌ उम्मे‌द्वार‌ परि‌पक्व हुनुहुन्छ ।
त्यसले‌ गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा कडा हुने‌ दे‌खिन्छ ।
निवर्तमान अध्यक्ष, ने‌पाल औ‌षधि व्यवसायी संघ, मे‌ची
नयाँ संर‌चना अनुसार‌ इलाममा पहिलो‌ पटक ने‌पाल औ‌षधि व्यवसायी संघको‌ जिल्ला अधिवे‌शन सम्पन्न भइसके‌को‌ छ । ताप्ले‌जुङ र‌ पाँचथर‌मा सदस्य संख्या नपुगे‌काले‌ संयुक्त रुपमा ने‌तृत्व चयन भएको‌ छ । झापामा आज जिल्ला अधिवे‌शनसहित ने‌तृत्व चयन हुँदै‌छ । औ‌षधि व्यवसायीका लागि यो‌ ऐ‌तिहासिक निर्वाचन हो‌ ।
जिल्ला महासचिवमा जीवन खड्का र‌ को‌षाध्यक्षमा बुद्धिशे‌खर‌ बजगाईं निर्विर‌ो‌ध निर्वाचित भइसक्नु भएको‌ छ । अध्यक्षमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने‌ निश्चित प्रायः छ । यद्यपि, प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुने‌मा हामी ढुक्क छौ‌ँ ।
पुर‌ानो‌ संर‌चना अनुसार‌ १८÷१९ जनाको‌ अञ्चल कार्यसमिति हुन्थ्यो‌ । अब ने‌पाल औ‌षधि व्यवसायी संघको‌ नौ‌ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति हुन्छ । जसले‌ व्यवसायमा समे‌त सहज हुने‌ आमव्यवसायीको‌ विश्वास छ । यो‌ निर्वाचनलाई सकार‌ात्मक रुपले‌ लिनु पर्छ । जसले‌ जिते‌ पनि आमव्यवसायीको‌ हकहितका पक्षमा काम गनेर्‌ कुर‌ामा दुई मत छै‌न ।
२०३० सालमा औ‌षधि व्यवसायी संघ स्थापना भयो‌ । त्यसपछि तमाम व्यवसायीले‌ यसको‌ छतामुनी बसे‌र‌ काम गरि‌र‌हे‌का छौ‌ँ । हिजो‌ अञ्चल र‌ के‌न्द्रीय समिति र‌हने‌ व्यवस्था थियो‌ । आजको‌ परि‌स्थिति भिन्न छ ।
जिल्ला तहमै‌ औ‌षधि व्यवसायी संघको‌ ऐ‌तिहासिक अधिवे‌शन आज हुँदै‌छ । यसलाई आम व्यवसायीहरुले‌ सकार‌ात्मक रुपमा लिनु पर्छ ।
संघको‌ जिल्ला ने‌तृत्वका लागि युवाहरुको‌ अग्रसर‌ता दे‌खिएको‌ छ । व्यवसायमा नयाँ पिंढीको‌ उपस्थिति उत्साहपूर्ण रुपमा दे‌खिनु खुसीको‌ कुर‌ा हो‌ । अब युवाहरुले‌ ने‌तृत्व लिएर‌ व्यावसायिक हकहितका लागि चलायमान बनाउनु पर्छ ।
निर्वाचनमा हार‌जीत हुन्छ नै‌ । त्यो‌ स्वाभाविक हो‌ । अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी दुवै‌ जना सक्षम र‌ यो‌ग्य हुनुहुन्छ । त्यसकार‌ण पनि निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने‌ दे‌खिन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसके‌पछि ने‌पाल औ‌षधि व्यवसायी संघले‌ पनि जिल्ला शाखा, प्रदे‌श इकाइ र‌ के‌न्द्रीय समिति बनाउने‌ नीति अघि सार‌े‌ अनुासार‌ झापामा जिल्ला अधिवे‌शन हुँदै‌छ ।
अधिवे‌शनले‌ निर्वाचन प्रक्रियाबाट ने‌तृत्व पनि चयन गदैर्‌छ ।
ने‌तृत्व चयन पश्चात औ‌षधि व्यवसायी संघ झापा शाखा आफ्ना समस्या समाधान गनेर्‌ महत्वपूर्ण निकायका रुपमा स्थापित हुने‌छ ।
सामुहिक छलफल गर‌े‌र‌ व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न र‌ व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि सहज हुने‌ हाम्रो‌ विश्वास छ ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र‌ सदस्य छनो‌टका लागि चुनावी प्रक्रिया हुँदै‌न । चुनावमा भाग लिइसके‌पछि एकले‌ जित्ने‌ र‌ अर्काले‌ हानेर्‌ स्वाभाविक प्रक्रिया हो‌ ।
यसलाई सहज रुपमा लिनु पर्छ । अध्यक्षका प्रत्याशी दुवै‌ जना यो‌ग्य र‌ दक्ष भएकै‌ कार‌ण कसको‌ पक्षमा पल्ला भार‌ी हुन्छ भन्ने‌ कुर‌ा भन्न सकिने‌ अवस्था छै‌न ।
NEWER POSTडेंगुका बिरामी झापामा मात्रै ५ सयभन्दा बढी
OLDER POSTदक्षिण एसियाभरी नै डेंगुको प्रकोप